‘कर्णालीका महिला दासको जीवन जिउन बाध्य छन्’ |
‘कर्णालीका महिला दासको जीवन जिउन बाध्य छन्’
प्रकाशित मिति :2018-01-15 12:02:19
कर्णालीकी लक्ष्मीकन्या बुढा सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन् । जुम्ला जस्तो विकट र दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएकी उनले १३ वर्षकै उमेरमा जनयुद्ध रोजिन् । महिला भएकै कारण कर्णालीका महिलाहरू दोस्रो दर्जाको जीवन भोगिरहेका थिए । तिनै महिलाहरूको कष्टपूर्ण जीवन देखेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सपना देख्दै युद्ध रोजेकी उनले जनयुद्धबाट के उपलब्धी हासिल भएको देखिन् त ? कर्णालीका महिलाहरूको अहिलेको जीवन कस्तो छ ? यही सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग महिला खबरका सन्दिप विकले गर्नुभएको कुराकानीः
राम्रैसँग बित्यो । बुबा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले खान लाउन समस्या भएन । दिदी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । एक दाई, चार दिदीबहिनीकी म कान्छि छोरी । जनयुद्धमा जानुअघि भर्खरै १२ वर्ष पूरा भएर १३ वर्ष लागेकी थिए । गाउँकै त्रिभुवन निम्न माध्यमिक विद्यालय मावि जुम्लामा सात कक्षामा पढ्थे । त्यसै बेला जनयुद्धमा सहभागि भएकी हुँ ।
पढ्ने, लेख्ने र रमाउने उमेरमा युद्धमा होमिने सोच चाहिँ कसरी आयो ?
त्यतिबेला कालिकोटतिरका माओवादी साथीहरू हाम्रो गाउँमा आउँथे । उनीहरू आउन थालेसँगै गाउँका दुई जना दाजुहरू २०५६ सालतिर जनयुद्धमा लाग्नुभयो । अर्को आफ्नै भिनाजु नरेश भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । भिनाजुको घरपरिवार कम्युनिष्ट नै थियो । भिनाजुको प्रेरणाले पनि म जनयुद्धमा लागे । उहाँले जनयुद्धको पक्षमा र महिलाका हक, अधिकारका विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो । माओवादीको सत्ता आयो भने बसिखाने होइन, गरिखाने मान्छेहरू धनि हुन्छन् भनेर उहाँले विभिन्न छलफल पनि चलाउनुभयो । ती छलफल र प्रशिक्षणहरूले निकै प्रभावित बनायो । अनि जनयुद्ध रोजे । सानैदेखि गाउँघरतिर महिला, आमा, दिदीबहिनीहरू हिंसामा परेका देखेकी थिएँ । उनीहरूको आफ्नो जीवन थिएन । महिलाहरूले आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने । बुबा, दाजुहरूले जे–जे भन्थे, त्यही काम गर्नुपर्ने । महिला पुरुषबिच ठुलो भिन्नता देख्थे । घरमा पनि आमाहरूले बुबाहरूले खाना नखाएसम्म खाना नखाने, बुबाहरू जाँड रक्सि खाने, जति ढिला आएपनि आमाहरू भोकै बस्नुपर्ने स्थिति थियो । अर्को गाउँतिर पुरुषहरू केही काम नगरी बसेका हुन्थे । हाम्रो उमेरका दाजुभाइहरू स्कूल गएको देखिने । तर दिदीबहिनीहरू स्कूल नगइ गाईभैँसी चराउने । भाउजुहरू दाउरा खोज्न जाने, महिलाहरूलाई फुर्सदै नहुने ।
पुरुषहरू बसेरै थाक्ने, महिलाहरूले थकाई समेत मार्न नपाउने परिपाटी थियो । माओवादी सत्ता आएपछि महिलाहरूलाई पनि समानता हुन्छ । पुरुषले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सुनाइन्थ्यो । त्यहि आशा बोकेर पार्टीमा लागे ।
त्यो बेला जनयुद्धमा खान, लगाउन नपाएका मान्छेहरू लाग्छन् भन्ने थियो । तर म पनि जनयुद्धमा लागेपछि परिवर्तन चाहाने जोसुकै पनि युद्धमा जान्छन् भन्ने बुझाई भयो । पछि गाउँका धेरै साथीहरू जनयुद्धमा लागे । बुबाआमाले मलाई चाहिँ युद्धमा जादिन होला भन्ने सोच्नुभएको थियो अरे । म जनयुद्धमा लागेपछि मेरै पिरले आमाले ४÷५ महिनासम्म खानापनि नखाएर जुसको भरमा बस्नुभयो रे । रातदिन नै रुने । छोरीलाई घरमा ल्याइदेउ भन्ने । त्यो समय हामी घर आउने वातारण थिएन । मेरै कारणले बुबा २०६९ सालमा जेल पर्नुभयो । छोरीलाई सहयोग गरेको आरोपमा राज्य पक्षले बुबालाई ६ महिना जेल हाल्यो ।
पार्टीको कुन–कुन पदमा रहनुभयो ?
२०५७ को अन्तिमतिर युद्धमा प्रवेश गरेँ । भूमिगत भएको दुई महिनापछि एरिया कमिटी सदस्य भए । त्यहि समय विद्यार्थीको जिल्ला कमिटी सदस्य भए । फेरि पार्टीको सचिवालय सदस्य भए । २०५८ को अन्तिमतिर विद्यार्थीको क्षेत्रीय सदस्य, २०६० मा केन्द्रीय सदस्य, वाइसिएलको क्षेत्रीय सदस्य भए । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रीय आयोजक समितिको सदस्य छु । त्यसरी नै पार्टीको जिम्मा लिएर अगाडी बढे । अर्को क्रान्तिकारी पत्रकार संघको क्षेत्रीय सदस्य पनि थिए । शान्ति प्रक्रियापछि रेडियोमा पनि काम गरे ।
महिलालाई युद्धमा लाग्न कत्तिको सहज थियो ?
युद्ध आफैमा कठिन कुरा हो । सहज हुने कुरै भएन । तर महिला भनेपछि त्यतिबेला माओवादी साथीहरूले धेरै सम्मान गर्ने । महिला साथीहरूले खाना नखाएसम्म पुरुष साथीहरूले नखाने । एउटै एरिया लिएर बस्ने साथीहरूको हकमा भने खासै गाह्रौ हुँदैनथ्यो । हामी विद्यार्थी मोर्चामा काम गर्ने भएका कारणले सबै भेरी कर्णालीका जिल्लामा हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो सँगसँगै भेरी कर्णालीको छात्रा विभागको प्रमुखपनि थिए म । हुम्ला, मुगुदेखि लिएर सुर्खेत सबै ठाउँमा हिँड्नुपर्ने भएका कारण गह्रौ झोला पुरुष साथीहरूले बोकिदिनुहुन्थ्यो ।
महिनावारीको समयमा भने मानसिक तनाव हुन्थ्यो । सरसफाई, प्रयोग गर्ने कपडामा खासै समस्या त हुँदैनथ्यो । उपलव्ध नै हुन्थ्यो । त्यतिबेला संकटकाल । सेना परिचालित भएको थियो । साह्रै अप्ठ्यारो भएको बेला रेष्ट गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो । रेष्ट गर्न नपाउने स्थितिमा सेनाले लखेट्यो भने कहिलेकाहीँ घेरा हाल्नेपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । त्यतिबेला दगुर्नुपर्ने हुँदा स्वभावैले कठिन त हुने नै भयो । युद्ध हो । कठिन भयो । तर व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो भने भएन ।
युद्धको बेलाका कुनै पीडादायी क्षण सम्झनुपर्दा ?
पीडादायी क्षणहरू धेरै छन् । म राजनीति फिल्डमै लागे । हाम्रो फिल्ड आ–आफ्नै हुन्थ्यो । तर दोहोरो भिडन्तमा भने धेरै ठाउँमा परे । सम्झना छ, जुम्लामै पनि भिडन्तमा परे । तीन गाविसको एउटा एरिया थियो त्यतिबेला । त्यो एरियाको इन्चार्ज/एसियस आफै थिए । तातोपानीमा घेरा हाले हामीलाई । घेरा हालिसकेपछि एक जना गाउँले अंकलले भण्डारामा राखेर हामीलाई बचाउनुभयो । अहिलेपनि त्यो अंकललाई हामी धन्यवाद दिन्छौं । अर्को हामी जुम्लाकै रारालिमा घेरा हालेकै अवस्थामा भाग्न सफल भएका थियौं । समूहमा हिँड्थ्यौ । कार्यकर्ताहरूलाई झोलेहरू भनेर नाम राखिएको थियो ।
अर्को हामी महिलाहरूका लागि धेरै जोखिम थियो । राज्य पक्षले महिलाहरूलाई सकभर समातेपछि बलात्कार गरेर मार्थे । विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्र गरेर मार्ने योजना थियो । अझ सार्वजनिक ठाउँमा मार्न सकियो भने युद्धमा महिला सहभागितामा कमि आओस् भन्ने सोच थियो । त्यो हुँदा समात्ने, त्यो भएन भने पनि तल्लो शरीरमा गोली हानेर समात्ने, हुँदै भएन भने गोली हानेर मार्ने उनीहरूको रणनीति नै थियो । त्यसो भएको कारण हामी हामीलाई पुरुष भन्दा चुनौति धेरै थियो ।
जे सोचेर जनयुद्धमा लाग्नु भो, त्यो पूरा भयो त ?
हामी जे सोचेर युद्धको बाटो रोज्यौं, ती सबै कुरा परिवर्तन त भएका छैनन् । तर अहिलेसम्म भएका उपलव्धी भने जनयुद्धकै एजेण्डा हुन् । हामी नै लागेर यहाँसम्म भएको भन्ने जस्तो लाग्छ । अहिले राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । सभामुख, प्रधानन्यायाधिश पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो । ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा पनि थियो । सत्तामा विशेष गरी नीति निर्माणको तहमा ।
अर्को गाउँघरतिर उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा महिलाहरूको सहभागिताको कुरा थिएन । महिला नभएपनि हुन्छ भन्ने समाजमा अहिले महिला अनिवार्य खोजिने परिपाटी विकास भएको छ । स्थानीय तहसम्म आइपुग्दा प्रमुख पदमा केही महिला आए भने उपप्रमुखमा त महिला नै आएका छन् ।
अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रत्यक्षमा कम महिलालाई अवसर दिइयो । त्यतिबेलाका महिलाहरू चुके । जनसंख्याको आधारमा महिलालाई जिम्मा दिनुपर्ने हो । अझै सोचे जस्तो त भएको छैन् । तर पहिलेको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । तर पनि निरन्तर लागेका छौं । यो बुर्जुवा राजनीतिमा सोचेको जस्तो भने नहुँदो रहेछ ।
महिलालाई राजनीतिमा आउन कतिको सहज छ ?
महिलाले धेरै बन्धनहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषहरू सजिलै आउँछन् । तर पितृसतात्मक सोच र चिन्तनबाट प्रभावित नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई राजनीतिमा लाग्दा घरपरिवार र समाजसँग निकै ठुलो लडाइ गर्नुपर्दछ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै बन्धनहरू तोडेर अगाडि आउन खोजेका छौं । अगाडि बढेका महिलाहरूलाई अघि बढाउने, अवसर दिने अवस्था छैन । यहाँ प्रहार गरेर अगाडि बढ्न नदिने स्थिति छ । सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो अवस्था छ । त्यसले गर्दा राजनीतिमा धेरै गाह्रो महिलाहरूलाई । फेरि समाजसेवा भन्ने हुन्छ । केही पनि आउँदैन । निस्वार्थ लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा आर्थिक विपन्नताको कुरा हुन्छ । बालबच्चाको व्यवस्थापन, घर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी पनि महिलाकै काँधमा हुँदा समस्या त छ । तर निरन्तर लागिरहने महिलाहरूलाई अवसर पनि त्यत्तिकै छन् ।
कर्णालीका महिलाको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
अवस्था सुधारोन्मुख छ । पहिलेको जस्तो छैन । अझै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । कर्णालीका महिलाहरू पशुहरू जस्तै भारि बोक्न बाध्य छन् । घरको सबै धन्दा, खेतिपातिको कुरा महिलाहरूले नै धान्नुपर्ने स्थिति छ ।
पहिले भन्दा अहिले केही जीवनस्तर परिवर्तन त हुँदै गएको अवस्था छ । तर पनि महिलाहरूमा कानूनी सचेतना छैन् । हाम्रा अधिकारहरू के–के हुन् स्वयम् महिलाहरूलाई थाहा छैन । कर्णालीमा अलिखित कानूनले साह्रै गाँजेको छ । त्यहि अलिखित कानूनले गर्दा महिला र पुरुषकोबिच कामको समेत बाँडफाड छ । सजिलो सजिलो काम पुरुषले गर्नुपर्ने, गाह्रो काम महिलाले गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
कर्णालीका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै कानूनी सचेतना दिन सकियो र महिलाको कार्य बोझ घटाउन सकियो भने छिट्टै परिवर्तन हुन्छ ।
त्यहाँका महिलाको मुद्धालाई कसरी उठाउनुभएको छ ?
महिलाको कार्य बोझ कसरी घटाउने र पुरुषको कसरी बढाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा लागिराखेको छु । अर्को हाम्रो कर्णालीमा छाउ प्रथा (महिनावारी प्रथा) निकै समस्याका रुपमा देखिएको छ । अलिखित कानूनले गर्दा नै महिलाहरू हिंसामा पर्न बाध्य छन् । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । महिनावारीका बेला सरसफाईदेखि छोइ प्रथा अन्त्यसम्म हामी लागी राखेका छौं ।
कर्णालीमा बालविवाह, बहुविवाह, जवरजस्ती विवाह अझैँ कायम छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि जिल्लामा हुने हरेक अन्तरक्रियामा मैले आवाज उठाएको छु । मैले कर्णालीमा महिलाको कुप्रथाकै विषयमा पनि कर्णालीमा महिला भन्ने किताब लेखेको छु । अर्को किताब लेख्ने तयारीमा छु । कर्णालीका महिलाले दासको जीवन जिउनुपर्ने परिस्थिति छ । दासताको जीवनबाट मानवको जीवनमा कसरी रुपान्तरण गर्ने गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागी परेका छौ ।
अहिले कर्णालीमा मात्र नभइ देशैभर महिलाहरूले पहिचानको लडाइ लड्नुपरेको अवस्था छ । महिला सृष्टि हुन, जन्मदाता हुन् । तर पनि उनीहरूले पहिचानको लागि लड्नु परेको अवस्था छ ।
यहाँका हिंसापीडित महिलाहरूको लागि न्याय दिने काम पनि मैले गरेको छु । कानूनी उपचार दिन सकिन्छ भने दिने नसेके न्यायालयसम्म पुर्याइदिने काम पनि गरिरहेको छु । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलको उपाध्यक्षमा पनि म छु । हरेक पीडामा परेका महिला म कहाँ आउँछन् । जुम्लामा महिला सेवा केन्द्र पनि छ । हामीले महिला सेवा केन्द्र हुँदै जिप्रका र त्यहाँपनि कुरा नमिले अदालतसम्म केश पुर्याउने गरेका छौ । महिलाहरू हिंसामा पर्नुहुँदैन् । मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकार महिलालाई पनि छ । महिला, पुरुषको समानताको समाज निर्माणका लागि म लागिरहेकी छु ।